New Train Links Asia With Europe | Save A Train
musha > Travel Europe > New Train Links Asia With Europe
A itsva chitima mutsetse wakatanga kurwisa, chokufuka Azerbaijan, Teki, uye Georgia. The mutsetse runofukidza 820 Makiromita uye rinokwana freights Kunze mutakurwi nezvitima. Chekutanga, muganhu uchava wokutanga kubatanidza Europe uye China vachigere pavaigona kutora chikepe chaienda Russia. The chitima kuchaita kushanda kubva Azerbaijan raMwari guru Baku uye vokuGeorgia guru Tbilisi kuguta Kars muna Turley. Uyezve, Zvichava kuderedza rwendo nguva pakati peEuropean njanji zvivakwa uye China njanji. Vatungamiri Azerbaijan, Teki, uye Georgia, uyewo European Union vamiririri, vakapinda Panovhurwa idzva chitima mutsetse.
Details of chitima
Chekutanga, chitima mutsetse pakutanga aronga vomurova mu 2010 uyezve mukati 2012. zvisinei, nokuda mutsetse kwete vagura Armenia, zvose US uye EU haana nemari kubatsira uye ichi akakonzera kunonoka. Pamusoro pe, mutsetse unoenda kuburikidza nenyika dzaimbove nedzadzo miganhu akavharwa kune mumwe (kufambidzana kudzokera Soviet Union).
chepiri, mutsetse inonzi iri 'Eurasian Bridge', achaita kubatanidza upfumi kunyika nepano. ChiChinese zvinhu zviri zvifambiswe kubva China kuEurope pamutsetse ino sezvo shoma sezvo 12 mazuva. Uyezve, ari chitima achaita kutakura 5 matani mamiriyoni nhumbi pagore pamwe nhamba iri kutarisirwa kumufungira 17 miriyoni pamusoro nguva. Mukuwedzera, izvi zvichaita kuti chengarava turusi kuAzerbaijan remasangano ari kweGungwa reCaspian nharaunda.
Azerbaijan haana kuzivisa zvizere Mari mutsetse zvisinei zvinozivikanwa kuti wakapiwa Georgia $775 mari vokuGeorgia chikamu mutsetse.
Kazakhstan zvino akasimbisa pachayo sezvo itsva 'Silk Road’ nebasa rayo rakawedzera rekutakura zvinhu pakati peEurope ne China. Maererano nenhau dzakaitika Kazakhstan akashanda somutariri unobva mamiriro kuti Europe, Asia, uye India. Chikonzero basa rekutakura zvinhu reKazakhstan radzokazve nderekuti rinocheka chinhambwe cheEurope kuenda kuAsia ne 10,000 makiromita. Uyezve, Kazakhstan akapedza pamusoro $3 bhiriyoni yawo njanji mitsetse. izvi zvinosanganisira $250 miriyoni kupedzerwa Khorgos Gateway. Iri suo rinobvumira zvitima zveChinese kuendesa zvinhu zvavo kuzvitima zveEurope zvichidzivirira kudiwa kwekuchinja mitsara.
Quotes chokuita idzva chitima mutsetse
Chekutanga, Mutungamiri Azerbaijan kuti akataura chitima
The Baku-Tbilisi-Kars Railroad ndiyo uye hwakavimbika zvikuru kubatana pakati Asia uye Europe
Mukuwedzera, European Union yakati
Panovhurwa Baku-Tbilisi-Kars njanji chikuru danho chokufambisa interconnections dzaibatanidza European Union, Teki, Jojiya, Azabhaijani, uye Central Asia ... pamwe yekare Silk Road,
Buy chitima matikiti
Sezvo uri kare pano, wadii 3 maminitsi kuwana zvakanakisisa chitima tikiti renyu rwendo inotevera? Chero kwauri kuronga kufamba rwendo Europe tinogona kukubatsira kuwana matikiti. Ungave uchitsvaga kuona Alps pamusoro Siwizarendi uye Itari kana zvichida kushanyira nyika yakaita Bherujiyamu uye Hangari tine iwe akafukidzwa. Bhuku rako chitima matikiti ikozvino. Kutenga matikiti vachishandisa zvose kupfuura kuzivikanwa mubhadharo nzira
Unoda embed yedu Blog pambiru uri paIndaneti, zvino tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fnew-train-links-asia-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)